Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Chivabvu 21, 2020
Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 vava makumi mana nevasere, uye vafa nechirwere ichi, vachiri vana munyika yose.
Munhu wekutanga anobatwa nechirwere cheCovid-19 kuMasvingo panguva iyo vanhu vakawanda vari kutyira kuti mudunhu iri munogona kunge muine vanhu vakawanda vane chirwere ichi asi vasiri kubuda pachena.
Hurumende inonzi iri kuronga kusimbisa mutemo unorambidza kufambafamba kwevanhu kana kuti lockdown, kuburikidza nekuwedera mauto nemapurisa mumigwagwa panguva iyo huwandu hwevanhu vari kubatwa ne Covid-19 huri kukwira.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuUnited Arab Emirates nedzimwe nyika zvochema chema zvichiti zvinoda kuti zvidzoserwe kuZimbabwe sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika zvadziri kugara nepamusana pe coronavirus iyo yavhiringa pasi rose.
Masangano evanhukadzi anorwira kodzero dzevanhu anokomekedza komisheni yeZimbabwe Human Rights Commission kuti itore matanho pane zvakaitika pamadzimai matatu eMDC ayo anoti akatochwa ari mumaoko emapurisa.
Nyaya iri kupomerwa vasori nemapurisa yekuve nechekuita nekupambwa nekuitwa kafiramberi madzimai matatu eMDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa yokonzera kupesana kukuru munyika.
Muchirongwa cheWomen’s RoundTable na8pm tiri kutarisa nyaya yekutochwa kwemadzimai matatu eMDC pamwe nezviri kuitika munyaya dzekurwisa chirwere cheCovid-19.